နေအိမ်/ညွှန်ကြားချက်/Windows 10 ကိုပိုမြန်အောင်လုပ်ပါ၊ သင်၏ကွန်ပျူတာကိုမြန်အောင်လုပ်ပါ
Vangelis11 ။ ဖေဖော်ဝါရီလ 2016
Windows 10 တွင် virtual memory ကိုပိတ်ပါ
Disk cleanup ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ
hard drive ကို defragment လုပ်ပါ
SSD hard drive ဖြင့်ပိုမြန်သည်
Windows 10 ကို software နှင့်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ပါ
Windows 10 ကို ပိုမြန်စေချင်သလား `Windows 10 ဟာ Microsoft က ဈေးကွက်ထဲမှာ အကောင်းဆုံးနဲ့ အမြန်ဆုံး စနစ်ပါပဲ။ သို့သော် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ Windows 10 သည် ပထမနေ့ကဲ့သို့ မြန်ဆန်စွာ အလုပ်မလုပ်တော့ဘဲ ဖြစ်သွားနိုင်သည်။ လည်ပတ်မှုစနစ်သည် အလွန်ပါးလွှာပြီး ကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိဘဲ ကွန်ပျူတာအဟောင်းများ သို့မဟုတ် မှတ်စုစာအုပ်များနှင့် အလုပ်လုပ်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် လှည့်ကွက်အနည်းငယ်ဖြင့် စနစ်ကို အရှိန်မြှင့်နိုင်သည်။ Windows 10 ကို ပိုမြန်အောင် လုပ်နည်း အနည်းငယ်ကို မိတ်ဆက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Windows 10 ကိုပိုမြန်အောင်လုပ်ပါ
Windows 10 Autostart: ပိုမိုမြန်ဆန်စွာစတင်ပါ
အကယ်၍ သင်သည် Windows 10 တွင် ပရိုဂရမ်များကို အချိန်နှင့်အမျှ ထည့်သွင်းပါက၊ အချို့သော ပရိုဂရမ်များသည် သင့်အသိပညာမရှိဘဲ စတင်လိမ့်မည်။ အဲဒါက အကျိုးဆက်ရှိတယ်။ Windows ကို 10 ဖြည်းညှင်းစွာ စတင်ပြီး သင် ၎င်းနှင့် အလုပ်မလုပ်နိုင်မီ အချိန်အနည်းငယ် ကြာပါသည်။ ထည့်သွင်းထားသော ပရိုဂရမ်များစွာကို ထည့်သွင်းထားသည်။ အလိုအလျောက်စတင်ပါ သို့မှသာ နောက်ခံရှိသူများသည် စတင်ပြီး လည်ပတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပြုချက်များဖြင့် Windows 10 ကိုပိုမိုမြန်ဆန်အောင်ပြုလုပ်နည်းကို သင့်အားပြသထားပါသည်။
ပေါ်တွင်ညာကလစ်နှိပ်ပါ Taskbar ပြီးတော့ဆက်လုပ်ပါ အလုပ်မန်နေဂျာ.
Windows 10 စတင်သည့်အခါတင်ပေးသောပရိုဂရမ်များအားလုံးကိုဤတွင်ဖော်ပြထားပါသည်။
မစသင့်သောပရိုဂရမ်ကိုကလစ်ပြီးအောက်ပါကိုနှိပ်ပါ Deactivate လုပ်ပါ။ သို့မဟုတ်ကိုနှိပ်ပါ ညာဘက် mouse ခလုတ် program တွင်ရွေးပါ Deactivate လုပ်ပါ.
မစသင့်သောအစီအစဉ်အားလုံးနှင့်ဤအရာကိုလုပ်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ၊ Internet Security နှင့် antivirus ကဲ့သို့သော program အချို့သည်သင်၏ system ကိုကာကွယ်ရန်နောက်ခံ၌အလုပ်လုပ်ရမည်ကိုသတိပြုပါ
အတု ကျပန်း access ကိုမှတ်ဉာဏ် Windows 10 တွင် disable လုပ်ပါ။
virtual memory ကို Windows 10 အောက်တွင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဖွင့်ထားသည်။ ဘယ်သူမပါဘူး SSD hard drive ပါ တပ်ဆင်ထားပါက စနစ်သည် နှေးကွေးသွားပါသည်။ သင်တစ်ဦးလျှင် SSD ကို အကယ်၍ သင်သည် ဟာ့ဒ်ဒစ်တစ်ခုကို တပ်ဆင်ထားပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အတုအယောင်မှတ်ဉာဏ်ကို ပိတ်ရန် အကြံပြုပါသည်၊ ၎င်းသည် အလုပ်လုပ်ပုံအတိုင်းဖြစ်သည်-
သော့တွဲကိုနှိပ်ပါ Windows ကို + X ကိုနှိပ်ပါ စံနစ်
အပေါ်ကကိုနှိပ်ပါ weရာဝတီ နှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော စွမ်းအား အပေါ် ဆက်တင်များ ... .
ဖွင့်လှစ်သောပြတင်းပေါက်၌ကလစ်နှိပ်ပါ weရာဝတီ virtual memory အတွက် ပြောင်း… .
မဖြုတ်ရသေးပါ - Drive အားလုံးအတွက် paging ဖိုင်အရွယ်အစားကိုအလိုအလျောက်စီမံပါ.
အချက်တစ်ခုလုပ်ပါ paging ဖိုင်မရှိပါ ကိုနှိပ်ပါ OK.
Windows 10 တွင် ဒေတာများစွာကို သိမ်းဆည်းထားသည်။ hard disk(ကက်ရှ်) အလုပ်လုပ်တာ ပိုမြန်တယ်။ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ထားသော ပရိုဂရမ်ဖိုင်များ၊ ယာယီအင်တာနက်ဖိုင်များ၊ ပုံသေးများနှင့် အခြားအရာများကဲ့သို့။ ဒေတာကို ဖျက်ရန် သို့မဟုတ် ဒေတာဝန်ဆောင်မှုပေးသူကို ရှင်းလင်းရန် အကြံပြုထားသည်။
ဘယ်ဘက်အောက်ခြေရှိ search bar တွင်ရိုက်ထည့်ပါ Disk သန့်ရှင်းရေး ၎င်းကိုနှိပ်ပါ စနစ် app ကို။
ဖွင့်လှစ်သောပြတင်းပေါက်အသစ်၌ hard drive တစ်ခုကိုရွေးပြီး OK ကိုနှိပ်ပါ။
Windows 10 သည်သိုလှောင်ရန်နေရာလွတ်မည်ကိုတွက်ချက်သည်။
သင်ဖျက်လိုသောဖိုင်အားဆုံးဖြတ်နိုင်သောစာရင်းတစ်ခုပေါ်လာသည်။ OK ကိုနှိပ်ပါ
Windows 10 သည် visual effects များကြောင့်အလွန်ကြည့်ကောင်းသည်။ သို့သော်အားနည်းချက်ရှိသောကွန်ပျူတာတွင် Windows 10 ကို install လုပ်ထားလျှင် virtual effects များကို deactivate လုပ်ရန်အကြံပြုသည်။
သို့သော်၊ မင်း minimize လုပ်တဲ့အခါကာတွန်းလိုမျိုး၊ ပြတင်းပေါက်တွေကိုချဲ့တာ၊ Taskbar ပေါ်ကကာတွန်းစသဖြင့်အမြင်အာရုံဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုကိုကိုယ်တိုင်ပိတ်ပစ်ဖို့ရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်။
သတိထားရမှာကဘယ်သူလဲ SSD hard drive ပါ ဤအဆင့်များကိုမသုံးသင့်ပါ။
hard disk ကို defragmented လုပ်သောအခါ data များကိုပြန်လည်စီထားသည်။ ထို့ကြောင့် Windows 10 သည်ဒေတာများကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာရယူနိုင်သည်။ ဒီမှာ hard drive ကို defragment လုပ်ပုံကိုငါတို့ပြမယ်။
စတင်ပါ Windows Explorer ကို
ကိုနှိပ်ပါ ညာဘက် mouse ခလုတ် သင် defragment လုပ်ချင်သော hard drive သို့ရွေးပါ အင်္ဂါရပ်တွေ.
ပြတင်းပေါက်အသစ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ Tools များ ပြီးတော့ဆက်လုပ်ပါ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပါ.
Hardware နှင့် software တို့ဖြင့် Windows 10 ကိုပိုမြန်အောင်လုပ်ပါ
သင် Windows 10 ကိုတကယ်မြန်စေချင်ရင်တစ်ခု install လုပ်ပါ SSD hard drive ပါမရ။ ခေတ်သစ် flash memory များသည်စာရေးခြင်းနှင့်စာဖတ်နှုန်းနှစ်ဆမှသုံးဆပိုမြန်သည်။
အဲဒါတွေက Windows 10 ကိုပိုမြန်အောင်လုပ်ဖို့အကြံပေးချက်တွေပါ။ သင်၏ Windows ကွန်ပျူတာကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးပိုမိုမြန်ဆန်စေသောစျေးကွက်တွင်သေချာသောအစီအစဉ်များစွာရှိသည်။ အဲဒါတွေရှိတယ် CCleaner ကို သို့မဟုတ် Ashampoo WinOptimizer
Windows 10: ပုံနှိပ်ခြင်းအလုပ်စတင်ဖျက်ပါ
Firefox extension ကိုပိတ်ပါ
Windows 10 တွင်မွမ်းမံမှုများအတွက်တပ်ဆင်မှုကိုသတ်မှတ်ပါ
Windows 10 တွင်အကြောင်းကြားချက်အသံပြောင်းပါ
Windows 10 ရှိ recycle bin ကို desktop မှဖယ်ရှားပါ
Windows 10: ကွန်ပျူတာကိုသော့ဖွင့်ရန် PIN တစ်ခုသတ်မှတ်ပါ
Windows 10 - ပိတ်ထားသောအခါမှတ်စုစာအုပ်ကိုပိတ်ထားသင့်သည်
အရှိန် ကွန်ပျူတာ ။ Windows ကို ပြတင်းပေါက် 10